သင့်ကို သူက တကယ်ချစ်မချစ် သိနိုင်စေမယ့် အချက် ၁၀ ချက် | Buzzy
သင့်ကို သူက တကယ်ချစ်မချစ် သိနိုင်စေမယ့် အချက် ၁၀ ချက်
တကယ်ချစ်သူဆို သူက ဒီအပြုအမူတွေကို ပြုမူမှာပါ
1. အချစ်ကို ပြသတယ်
သင့်ကို သူက တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တော့ သင့်လက်ကို ဆုပ်ကိုင်ဖို့ ဘယ်တော့မှ မတွန့်ဆုပ်သလို အနမ်းပေးဖို့လည်း အမြဲတမ်း အသင့်ပါ။
သငျ့ကို သူက တကယျခဈြတယျဆိုရငျတော့ သငျ့လကျကို ဆုပျကိုငျဖို့ ဘယျတော့မှ မတှနျ့ဆုပျသလို အနမျးပေးဖို့လညျး အမွဲတမျး အသငျ့ပါ။
2. အမှတ်တရတွေကို မျှဝေတယ်
သင့်ချစ်သူက သင်နဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့ ထင်ရတဲ့ အရာတွေနဲ့ ပတ်သတ်လို့လည်း ပြောပြတက်ပါတယ် ။ ဥပမာအားဖြင့် ဘက်စကတ်ဘောကစားတာ ရုပ်ရှင် အကြောင်း ၊ စသဖြင့်ပေါ့ ။ ဒါဟာ သူ့ရဲ. အတွေ့အကြုံကို သင်နဲ့ မျှဝေလိုစိတ် ရှိတာပါ။
သငျ့ခဈြသူက သငျနဲ့ မဆိုငျဘူးလို့ ထငျရတဲ့ အရာတှနေဲ့ ပတျသတျလို့လညျး ပွောပွတကျပါတယျ ။ ဥပမာအားဖွငျ့ ဘကျစကတျဘောကစားတာ ရုပျရှငျ အကွောငျး ၊ စသဖွငျ့ပေါ့ ။ ဒါဟာ သူ့ရဲ. အတှအေ့ကွုံကို သငျနဲ့ မြှဝလေိုစိတျ ရှိတာပါ။
3. သင်နဲ့ အတူရှိနေရတာကို ပျော်တယ်
သူက အလုပ်များတက်တဲ့လူ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ၊ ဒါပေမယ့် သင်နဲ့ အတူရှိခွင့်ရဖို့က သူ့အတွက် အရေးကြီးဆုံးလို့ ခံယူထားပြီး ၊ ဒီအတွက် အချိန်ရအောင်လည်း ဖန်တီးပါလိမ့်မယ်
သူက အလုပျမြားတကျတဲ့လူ ဖွဈကောငျးဖွဈပါလိမျ့မယျ ၊ ဒါပမေယျ့ သငျနဲ့ အတူရှိခှငျ့ရဖို့က သူ့အတှကျ အရေးကွီးဆုံးလို့ ခံယူထားပွီး ၊ ဒီအတှကျ အခြိနျရအောငျလညျး ဖနျတီးပါလိမျ့မယျ
4. လိင်ကိစ္စဟာ နှစ်ယောက်စလုံး အတွက်လို့ သူသိတယ်
ချစ်တင်းနှောတဲ့အခါမှာ သူက သင့်အတွက်ပါ စဉ်းစားပါလိမ့်မယ် ၊ သင့်သာယာမှုကိုလည်း သူက အလိုက်တသိ ဖြည့်ဆည်းပေးလိုစိတ် ရှိပါလိမ့်မယ်။
ခဈြတငျးနှောတဲ့အခါမှာ သူက သငျ့အတှကျပါ စဉျးစားပါလိမျ့မယျ ၊ သငျ့သာယာမှုကိုလညျး သူက အလိုကျတသိ ဖွညျ့ဆညျးပေးလိုစိတျ ရှိပါလိမျ့မယျ။
5. သင်က သူ့ဖုန်းကို မကိုင်မိတာ စာမပြန်တာကို နားလည်မှုပေးမယ်
သင့်အနေနဲ့ ရံဖန်ရံခါ သူ့ရဲ. ဖုန်းကို မကိုင်မိတာ ၊ စာမပြန်မိတာတွေကို သူက သံသယမဝင်ပဲ အလိုက်သိတက်တယ် ဆိုရင်တော့ သူက သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးပါပဲ
သငျ့အနနေဲ့ ရံဖနျရံခါ သူ့ရဲ. ဖုနျးကို မကိုငျမိတာ ၊ စာမပွနျမိတာတှကေို သူက သံသယမဝငျပဲ အလိုကျသိတကျတယျ ဆိုရငျတော့ သူက သငျ့အတှကျ အကောငျးဆုံးပါပဲ
6. သင့်ကိုယ်သူ ယုံကြည်မှုရှိအောင် ကူညီနိုင်
အချစ်စစ်ဟာ ဘယ်တော့မှ သင့်ကို လဲကျအောင် ထိုးနှက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ သူက သင့်ကို ချစ်တဲ့အတွက် သင့်ကိုယ်သင် ယုံကြည်မှုရှိအောင် အမြဲအားပေးပါလိမ့်မယ်
အခဈြစဈဟာ ဘယျတော့မှ သငျ့ကို လဲကအြောငျ ထိုးနှကျမှာ မဟုတျပါဘူး ။ သူက သငျ့ကို ခဈြတဲ့အတှကျ သငျ့ကိုယျသငျ ယုံကွညျမှုရှိအောငျ အမွဲအားပေးပါလိမျ့မယျ
7. သင်ဖျားနာနေချိန်မှာ သင့်ကို ဂရုစိုက်မယ်
သင့်အနေနဲ့ သင်ဖျားနာနေချိန်မှာ သူက ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုရင် သင့်ကို သူမချစ်လို့ပါပဲ ။ သင့်အနားမှာ တစ်နေ့လုံး ရှိနေမယ် ၊ ဆေးသောက်ဖို့ သတိပေးမယ် ၊ စွပ်ပြုတ်ပူပူလေးတစ်ခွက် လုပ်ပေးမယ် ။
သငျ့အနနေဲ့ သငျဖြားနာနခြေိနျမှာ သူက ဂရုမစိုကျဘူးဆိုရငျ သငျ့ကို သူမခဈြလို့ပါပဲ ။ သငျ့အနားမှာ တဈနလေုံ့း ရှိနမေယျ ၊ ဆေးသောကျဖို့ သတိပေးမယျ ၊ စှပျပွုတျပူပူလေးတဈခှကျ လုပျပေးမယျ ။
8. သူ့ မိသားစု သူငယ်ချင်းတွေရှေ.မှာ သင့်ကို မတိုက်ခိုက်ဘူး
သင်တို့ နှစ်ယောက်တည်း ရှိနေချိန်မှာသာ ဂရုစိုက်တာမဟုတ် ၊ သူငယ်ချင်းနဲ့ မိသားစုဝင်တွေ ရှေ.မှာလည်း သင့်ရှေ.က မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်တယ်ဆိုရင်တော့ ချစ်လွန်းလို့ပါ
သငျတို့ နှဈယောကျတညျး ရှိနခြေိနျမှာသာ ဂရုစိုကျတာမဟုတျ ၊ သူငယျခငျြးနဲ့ မိသားစုဝငျတှေ ရှေ.မှာလညျး သငျ့ရှေ.က မားမားမတျမတျ ရပျတညျတယျဆိုရငျတော့ ခဈြလှနျးလို့ပါ
9. သင့်ဘဝနဲ့ ပတ်သတ်လို့ သူစိတ်ဝင်စားတယ်
သင့်ဘဝမှာ အခက်အခဲတွေ တွေ့ကြုံရရင် သူက ဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့ စိတ်ဝင်စားတယ် ။ သင်ဘာဖြစ်ဖြစ်
သငျ့ဘဝမှာ အခကျအခဲတှေ တှကွေုံ့ရရငျ သူက ဖွရှေငျးပေးနိုငျဖို့ စိတျဝငျစားတယျ ။ သငျဘာဖွဈဖွဈ
10. သင်ပြောတာကို နားထောင်ပေးတယ်
သင့်ချစ်သူက သင်ပြောဆိုတာကို အမြဲလိုလို အလေးအနက်ထား နားထောင်ပေးတက်တယ် ၊ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သင့်ကို သူက ဂရုတစိုက်ရှိလို့ပါပဲ။
သငျ့ခဈြသူက သငျပွောဆိုတာကို အမွဲလိုလို အလေးအနကျထား နားထောငျပေးတကျတယျ ၊ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ သငျ့ကို သူက ဂရုတစိုကျရှိလို့ပါပဲ။
သင်ရော သင့်ကို တကယ်ချစ်တဲ့ ချစ်သူ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီလား